Dangal Wuxuu Bar Bareen Doonaa Iskoor Mudo Dheer U Yiilay Filimada Sholay (1975) Iyo Hum Aapke Haim Koun (1994)!! | Filimside.com – Wararkii Ugu Dambeeyay Aflaanta Hindiga	Monday, February 20th, 2017	HOME
Dangal Wuxuu Bar Bareen Doonaa Iskoor Mudo Dheer U Yiilay Filimada Sholay (1975) Iyo Hum Aapke Haim Koun (1994)!!
Jan 10, 2017 - 1 Jawaab	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: 10, January 2017
Taariikhda fanka Hindiya labo filim ayaa dhigeen iskoor waali ah gaar ahaan 50-kii sano ee ugu dambeesay waana Sholay (1975) iyo Hum Aapke Haim Koun (1994).
Sholay (1975) iyo Hum Aapke Haim Koun (1994) waa labada filim ee kaliya kuwaas oo iskoor ka dhigeen 13-ka gobol ee filimada Bollywood-ka ganacsiga ugu badan ka sameeyeen taariikh ahaan.
Darajada Sholay (1975) iyo Hum Aapke Haim Koun (1994) ay mudada dheer iska heesteen waxaa haatan si rasmi ah u gaari doono filimka Dangal ee Mr. Perfectionist Aamir Khan hogaamiye ka yahay.
Dangal mudo sedex todobaad ah wuxuu la wareegay iskoorka 6-ka mid ah 13-ka gobol ee filimada Bollywood-ka ganacsiga ugu badan kasoo xareeyaan!
Dangal waxaa u harsan 7-gobol inuu iskoorka lacagaha la wareego waana hubaal inuu la waraagi doono marka uu todobaadkiisa 4-aad dhameesto.
Shabakada Boxoffice India Trade Network oo soo daabacday maqaalkan ayaa sheegtay in Dangal uu noqon doono filim la wareego sedex iskoor oo ay adag tahay gobol walbo asigoo noqon doono filimka lacagaha ugu badan gobol walbo kasoo xareeyo, filimka saamiga ugu badan kooxda cajaladaha ka helaan gobol walbo iyo filimka lacagaha guud gobol walbo kasoo xareeyo ka hor canshuurta!
Dangal wuxuu noqday Hit-kii sedexaad ee ugu weyn oo ay Hindiya sameeyaan 50-kii sano ee ugu dambeesay wuxuuna ku biiray darajada mudada dheer gaarka u ahayd filimada guusha taariikhiga ah gaareen Sholay (1975) iyo Hum Aapke Haim Koun (1994).
Sidoo kale Dangal suuqyada caalamka wuxuu iskoor ka dhigay US / Canada iyo Australia asigoo halkaas ka noqday filimka Hindiga ah midkiisa lacagaha ugu badan taariikh ahaan kasoo xareeyo!
Fadlan hoos kaga bogo Dangal 6-gobol ee uu iskoorka lacagaha gudaha Hindiya la wareegay iyo filimada uu kala wareegay iskoorkan:
Delhi / UP – 71.23 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka Bajrangi Bhaijaan oo horey usoo xareeyay 70.60 crore.
Iskoorka uu Dangal Delhi ka sameeyay: wuxuu noqday filimka lacagaha nadiifka ah iyo saamiga ugu bada laga helo waxaa u harsan inuu noqdo filimka lacagaha guud canshuurta ka hor halkaas kasoo xareeyay.
F.G – Dangal waxaa canshuurta laga dhaafay gobolka UP maalintiisii 8-aad halka Delhi canshuurta laga dhaafay maalintiisa 15-aad.
East Punjab – 40.66 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay 33.44 crore.
Iskoorka uu Dangal East Punjab ka sameeyay: Dhaman iskoorada wuu la wareegay lacagta ugu badan canshuurta ka hor, lacagata ugu badan canshuurta kadib iyo saamiga ugu badan ee laga helay!
F.G – Dangal waxaa canshuurta laga dhaafay gobolka Haryana maalintiisii 5-aad.
Rajasthan – 19.01 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka Sultan oo horey usoo xareeyay 18.99 crore.
Iskoorka uu Dangal Rajasthan ka sameeyay: wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan canshuurta ka hor soo xareeyo, filimka lacagaha ugu badan ee nadiifka ah lag helo laakiin weli ma noqonin filimka saamiga ugu badan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaa.
CI – 12.79 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay 12.59 crore.
Iskoorka uu Dangal CI ka sameeyay: wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan canshuurta ka hor soo xareeyo, filimka lacagaha ugu badan ee nadiifka ah lag helo laakiin weli ma noqonin filimka saamiga ugu badan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaa.
Mysore – 24.97 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay 23.85 crore.
Iskoorka uu Dangal Mysore ka sameeyay: Dhaman iskoorada wuu la wareegay lacagta ugu badan canshuurta ka hor, lacagata ugu badan canshuurta kadib iyo saamiga ugu badan ee laga helay!
Tamil Nadu / Kerala – 11.72 crore nett (18-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay 9.46 crore.
Records: Dhaman iskoorada wuu la wareegay lacagta ugu badan canshuurta ka hor, lacagata ugu badan canshuurta kadib iyo saamiga ugu badan ee laga helay!
Overseas (Suuqyada Caalamka):
US / Canada – $11,200,000 (18-maalmood) -wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay $10,617,000.
Australia – Au$2,300,000 (15-maalmood) – wuxuu iskoorka kala wareegay filimka PK oo horey usoo xareeyay Au$2,110,000.
Shabakada Filimside Waxay Leedahay Hambalyo Aamir Khan Iyo Taageerayaashiisa Madaama Super Star-kaan Darajo Qariib Ah In La Gaaro Uu Ku Tilaabsaday……………..
Waxaa Aqrisay Warbixintaan (980)
xasancilmijeeri. says:	10, January 2017 at 6:04 pm	Congratulations one man army aamir khan vs aamirians👆..